Shiinaha dharka fudud ee dharka fudud Gabdhaha jeebka yar ee boorsada leh ayaa jeebka boorsada jeebka gaaban 3 boorsada jeebka ku duuban Warshadda iyo Alaab bixiyaha | Sansan
Gabdhaha moodada fudud ayaa jeebka yar ee jeebka jeebka jeebka 3 jeebka jeebka ku laalaada
Waxyaalaha PU ee bay'adda u habboon ayaa laga doorbidayaa, biyuhu aan la celin karin, qoyaan-caddeyn, jilicsan oo caafimaad qaba. Waxay cabbirtaa 3.9 inji x 3.5 inji x 1.2 inji (qiyaastii 10 cm x 9 cm x 3.2 cm) oo culeyskeedu yahay 110 garaam.
Shayga No. ywssd-035
Jinsi la adeegsan karo dhedig
Waxyaabaha Maqaar PU
Wallet laab 3 laab
Habka furitaanka quful
Qaabka gudaha ee xirmada yar booska sawirka, biilka haysta, booska kaarka, grid qarsoon, booska beddelka
Qaabka shandadda laba jibaaran
Qaabka Qaab Retro
Waxyaabaha caanka ah ubax
Munaasabadaha hadiyadaha hadiyado lagu dabaqi karo xaflada furitaanka, faa iidooyinka shaqaalaha, carwooyinka ganacsiga, aroosyada, guri guri, qorsheynta xiriirka bulshada, maalmaha dhalashada, xuska safarka, xafladaha sanadguurada, xafladaha abaalmarinta, ciidaha, xayeysiinta xayeysiinta, hadiyado ganacsi
Daabac LOGO Haa
Dareenka dharka polyester
Ka shaqeynta macaamiisha Haa
Midab guduud, buluug, madow, casaan, koollo digirta cas
Miisaanka badeecada 0.11kg
Cabbirka badeecada 10 * 9 * 3.2cm
Boorsadan si fiican loo qaabeeyey ayaa leh 1 meel oo waaweyn oo bayaanku yaallo, 5 goobood oo kaydinta kaarka ah, 1 goob sawir oo muuqda oo muuqda iyo 2 xirmooyin qarsoon. 1 jeebka la beddelo oo leh naqshad bir ah oo qaali ah ayaa kaydin karta isbeddelka iyo waxyaabaha yaryar. Isticmaalka caadiga ah ayaa ku filan inuu buuxiyo baahida.
Dusha dusha sare ee boorsada waxaa lagu qurxiyaa ubax qurux badan oo jilicsan, oo muujinaya xarrago. Waxaan diirada saareynaa faahfaahin kasta oo ku saabsan howsha, waxaanan si joogta ah usii wadnaa alaabada saxda ah. Waxaan aaminsanahay in agab tayo sare leh, naqshad fikir leh iyo farshaxanimada heerka koowaad ay kuu keenayaan waayo-aragnimo badeecadeed oo la xoojiyay.
Habboon oo ku habboon haweenka da 'kasta leh. Waxaa lagu siin karaa hadiyad ahaan naftaada, xubnaha qoyska, saaxiibbada, ka yaabiso oo kaftan, isla markaana u keena maalin wanaagsan.
Hore: Boorsada Dharka Dheef-shiidka ee Dharka Dheef-shiidka ee ragga oo caadi ah
Xiga: Wallet Lady cusub oo Gaagaaban oo Dhar-gaaban oo Zellim Tassels 2 Ah Wallet
Boorsada Dharka Dheer ee Qalabka Cas ee Cas
Ragga Wallet-ka Ragga ee Gaarka ah Saddex-laab ...
Nidaamka cusub ee USB ku soo dallacayo ragga ayaa caadi ahaan cas ...
Boorso boorso gacmeed cusub oo xajmi dheer leh ...
Wallet Lady cusub oo Dhar Gaaban oo Ku Yaal Korean
Dumar cusub ayaa jeebka boorso boorsada dheer ...